Vatengesi veBonnet uye Fekitori - China Bhoneti Vagadziri
Nyowani dhizaini Silk bhoneti yakasimba pink
Iri bvudzi resilika rinoratidzira maRibhoni marefu kumashure neyakavharwa bhendi uye dhizaini dhizaini kumberi. Yakagadzirwa neakanakisa 100% Giredhi 6A yakachena mulberry sirika ye16mm, 19 mm, 22mm uremu, kupa rako bvudzi dziviriro yakasarudzika kubva kukuvara kwehusiku. Inochengetedza bvudzi hunyoro hwepanyama uye kupenya, kushoma kuputsa kana uchinge wakarara. Inodzivirira kurasikirwa kwebvudzi uye inobatsira kukura zvakare. Inochengeta rako rebvudzi kutsva rinotaridzika uye kumuka usina frizz / musoro wemubhedha. ● Maitiro: Classic Silk Husiku Kurara Kapu ine maRibhoni. E ...
Silk bhoneti sirivheri ruvara
Silk bvudzi cap chivharo chepingi
Silk husiku bhoneti
Silk musoro cap
Silk chivharo chekurara chebvudzi rakamonana
Silk bhoneti yegoridhe ruvara
Mulberry silika bhoneti
Polyester kurara ngowani
Nhepfenyuro Kutaurwa Kwetsika polyester Bonet Fabric Sarudzo 100% Polyester Yakakurumbira Size HUMWE saizi inokodzera saizi yemusoro: 50-100cm, Craft Dhijitari yakadhindwa pateni kana Logo yakashongedzwa pane yakasimba color, imwechete kana yakapetwa kaviri. Musoro Bhendi Elastic bhendi ine maribhoni anoita kuti hope dzive dzekurara husiku hwese, dzakakodzera chero zvitaera zvebvudzi, senge dzakamonana, mawigi, yakatwasuka, dreadlock uye nezvimwewo Kana kudhirowa kunokutendera kuti uchinje kuwedzeredza nekusunga kwebhoneti chivharo. Inowanikwa Colors Kupfuura 2 ...
Nyowani dhizaini Poly satin bonnet
Polyester satin bhoneti ruva